Who were Bengali, so called Rohingya?: ရခိုင်လူမျိုးမှာ ကုလားမရှိပါ။
Ref: ခိုင်ရိုးမ(Facebook wall)
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 9:11 AM
ဗုဒ္ဒဘုရားရှင်ကို ကုလားလို့ ပြောတယ် နော် :) ကိစ္စ မရှိပါဘူး ကုလားဘဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် . . . အဓိက က ဒိဌိပြုတ်ပြီးသား ၊ သစ္စာလေးပါး တရားတော်များကို သိမြင်ပြီးသား ပါ။ ကုလားလူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုး၊ နီဂရိုး လူမျိုးတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ၊ သစ္စာလေးပါး တရားကို သိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် နဲ့ ဒိဌိပြုတ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဆိုရင် ဘယ်လူမျိုး မဆို ကိုးကွယ်ဘို့ အသင့်ပါ . . . ကြုံတုံးလေး တစ်ခုလောက်ပြောချင်လို့ပါ . . . လူတွေမှာ လူ့ အခွင့်အရေး ရှိလို့ နိုင်ငံတော်က လူအခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ သဘောနဲ့ လူသားခြင်းစာနာထောက်လား တဲ့သဘောနဲ့ ပြန်လည် လက်ခံတာ ကို ကမ်းမတက်လာပါနဲ့ . . . နောက်တစ်ခု . . . မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေဟာ . . . တရိစ္ဆာန် ညှင်းပန်း နှိပ်ဆက်မှု နဲ့ တရားစွဲခံထိုက်တဲ့ သူတွေပါ . . . နွားတွေ ၊ ဆိတ်တွေကို လည်လှီးသတ်တာ ကတော့ ရက်စက်လွန်းပါတယ် . . . ကမ္ဘာ့လုံး ဆိုင်ရာ တိရိစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဌာနက ဆန့်ကျင်သင့်ပါတယ် . . . ဦးနှောက်ရှိရှိ တွေးကြည့်ရင် အရမ်းကို မိုက်မဲတဲ့ ဘာသာတစ်ခုပါ . . . ဆရာပြောတိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့ ဘာသာဖြစ်နေလို့ပါ . . . ဆရာက ငါ့ကို ယုံကြည့်ရင် ချီးစားပြ ဆိုရင်လည်း စားပြကြမှာလား . . . မိုက်ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ . . . နောက်ဆုံးပြောလိုတာက တော့ ဗုဒ္ဒ ဘုရားရှင်ကို မစော်ကားပါနဲ့ လူတွေက ကြည့်နေပေမဲ့ ငရဲက ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ဘူး . . . တကယ်တန်း ယှဉ်လို့ ပြောကြေး စတမ်းဆိုရင် လွတ်လပ်စွာ စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ် . . . အယူဝါဒ ရေးရာ ပြိုင်ချင်ရင် ပြိုင်နိုင်တယ် . . . ဘလိုင်းကြီး မစော်ကားပါနဲ့ . . . အဲ့ဒီ ဘာသာဝင်တွေ လိုက်နာတာ အဲ့သလို ဆဲဘို့ အကြောင်းရာတွေလား . . .
တောင် အသိမရှိဘူး ဒါကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး
ထဲမပါတာပေါ့ လူဆို လူ့အခွင့်အရေးရမှာပေါ့
ထိုင်းကလည်း ပင်လယ်ထဲ ပြန်မျောပစ်တယ်
ဘင်းဂလားကလည်း လက်မခံဘူး ဒီခွေးကုလား
တွေကို ၀က်သားထဲ ကြွက်ဆေးခတ်ပြီး သတ်ပစ်
ခွေးကုလား မျိုးစောင့် မင်းတို့ခွေးကုလားတွေ
၀က်ချီးငုံပြီးပင်လယ်ထဲ ဆင်းရတော့မယ် အဲဒါ
မင်းတို့ရဲ့ အပြစ်ပဲ ဗမာတွေ ရခိုင်တွေကပဲ လက်
ကို မင်းတို့ကို အသိအမှတ် မပြုတာ။မင်းတို့တွေ
ဟာ လူမဟုတ်သေးလို့ လူ့အခွင့်ရေးမတောင်း
နဲ့အုံး ကြားလား ခွေးသတောင်းစား။ စောက်ခွက်
ကို ၀က်လီးနဲ့ အရိုက်ခံရမယ် ။
( ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ )
စစ်တကောင်းအနွယ် ဘင်ဂါလီ ဖွားပါဗျ
ရိုဟင်ဂျာ သူထွင်လိုက်ပေမဲ့ အများက လက်မခံ ဆိုးလိုက်တဲ့ကံ။ ။
၁၉၅၀ တ၀ိုက်ဆီက မြန်ပြည်မှာ ဆူပူကြချိန်ပေါ့
အချိန်တွေရယ် ကြာရင်နှောင်းပေမဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုကာ အော်အော်တောင်းသော်
လည်း ရာဇ၀င်ဆိုတာ အခိုင်အမာ ရှိလေတော့ ဆင်လီးခွေးမျှော်သလို။ ။
ခွေးလခွံ ခေါင်းမှာ ဆောင်းကာပ
ဘင်ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ကုလားတွေဟဲ့
ဆင်ကြီးကို အဆော်လွှတ်ရုံပလေး။ ။
ဒစ်ကုလား မျိုးစောင့် မင်းဒီကဗျာကို ပရင့်ထုတ်ပြီး မင်းတို့ ကိုယ်မေ ကိုယ်လိုး လီးကုလားတွေကို အခမဲ့ဝေပေးလိုက် ပြီးရင်
အရကျက်ထား ငါ ခဏခဏ မဆဲချင်ဘူး လီးကုလား ခွေးမသားရဲ့။
မျိုးစောင့်... ဘဘကြီးမင်းကိုပြောမယ်.. "မျိုးစောင့်" ဆိုတာမြန်မာစကားလေ၊ မြန်မာစကားနဲ့မြန်မာWebsiteမှာ ဘာလို့လာမိုက်ရိုင်းနေတာလဲ? မင်းမရှက်ဘူးလား? မင်းရေးတဲ့စာလုံးပေါင်းတွေကကလည်း အမှားတွေချည်းပဲ။ စာမသင်ဖူးဘူးထင်တယ်၊ မျိုးစောင့်တယ်ဆိုတာ ဘာမျိုးစောင့်တာလဲ? ခွေးမျိုးလား? ဒါမှမဟုတ် မင်းနာမည်ပြောင်းလိုက်ကွာ၊ "မျိုးဆောင့်" လို့။ မင်းကစာမတတ်တော့ စာလုံးပေါင်းမှားလည်း သိပ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒါမှကိုယ့်အမျိုးကိုယ် ဆောင့်လို့ရမှာ။ ဆောင့်ရင်လည်းသိပ်နာအောင်မဆောင့်နဲ့ကွ၊ မင်း အမာတို့၊ ကာကာတို့၊ နာနီတို့ ကိုဆိုဖြည်းဖြည်းဆောင့်ကွ။ မကောင်းဘူးလေ၊ ကိုယ့်အမျိုးကိုဆောင့်တော့ နာကုန်ရင်ခက်ကုန်မှာကွ။ ငါမင်းတို့ မွတ်စလင်တွေ လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းများလှချည်လားလို့ကြည့်နေတာ.. အေးတွေ့သကွ.. ကိုယ့်မျိုးကိုဆောင့်တော့လည်း အထွက်များတော့ပေါ့။ အဲဒါကြောင့်မင်းတို့မွတ်စလင်ရုပ်တွေကတူနေတာကိုး။ အဖေလည်းဒီရုပ်၊ မွေးလာတဲ့ကလေးတွေလည်းဒီရုပ်၊ အဲဒီကလေးတွေနဲ့ အဖွားတွေ၊ အမေတွေ၊ အဒေါ်တွေ၊ အစ်မတွေ၊ ညီမတွေ ပြန်ညား၊ ပြန်မွေးကြတော့ ဒီရုပ်တွေပဲဖြစ်နေတာကိုး...။ အဲ.. တစ်ခုမေ့နေလို့.. မင်းကိုယ့်မျိုးကိုယ်ပြန်ဆောင့်လို့ အဆင်မပြေရင် ဘဘကြီးကိုခေါ်ကွဲ့။ ဘဘကြီးက တိရိစ္ဆာန် တွေကိုတော့ ကာမ မစက်ယှက်ဖူးဘူးကွဲ့၊ မင်းတို့လိုအပ်ရင်တော့ ဘဘကြီးကူညီဆောင့်ပေးပါမယ်။ ဘဘကြီးက မင်းတို့ မိုဟာမက်ပစ္စည်းလောက်တော့ အပျော့ပေါ့။ မင်းတို့မိုဟာမက်က ဖြတ်ရုံတင်ဖြတ်ထားတာ၊ အလကားကောင်၊ ဘကြီးကဖြတ်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး၊ ဂေါ်လီကို နဂါးပတ်ထားသကွဲ့။ တော်ရုံတောင်ရုံ မွတ်စလင်မ.. ဘကြီးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်များ... အလာကယ်ပါ.. အပြန်ကယ်ပါ... အော်တော့တာပဲသကွဲ့၊ တိရစ္ဆာန် အထီးဆို B ပါဖွင့်ပေးတယ်၊ မင်းလျော်ချင်တယ်ဆိုလည်းဘဘကြီးဆီလာခဲ့ကွဲ့။ မင်းတို့မှာလည်း ခက်သကိုးကွ၊ လူဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်လို ပဲကျင့်ကြံနေရသကိုး။ မင်းတို့ ဖင်ကုန်းပြီး အလာ အလာ လုပ်နေတဲ့ကောင် ကိုယ်တိုင်ကမှ ကိုယ့်အမေကို ပြန်စားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ လည်းခက်ပြီပေါ့။ မင်းတို့နေ့တိုင်း ဖင်ကုန်းပြီး အလာ အလာ လုပ်နေတာရောဘာကြီးတုန်း မင်းသွားလှန်ကြည့်ဖူးရဲ့လား.. မင်းကို ဘဘကြီးအကြံပေးမယ်.. ဘယ်သူမှမပြောနဲ့နော်. နောက်၁ခေါက်မင်းတို့ ဖင်ကုန်းအော်တဲ့နေရာရောက်ရင် သွားလှန်ကြည့်... လော်တကီးကြီးတွေ့လိမ့်မယ်၊ ၁နှစ်၁ခါ အတိုးအကြိတ် သွားသွားနေကြတဲ့ မက္ကာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဲဒါကြီးကို အုပ်ထားတာ။။ တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတော့လည်းစဉ်းစာဥာဏ်မရှိတော့ ပိုက်ဆံတွေပေးပြီး သွားသွားနေကြတာပေါ့ကွာ။ မင်းနဲ့ဘဘကြီးလောင်းမယ် မင်းရှုံးရင် ဘဘကြီးကို မင်းတို့အိမ်ခေါ်သွားပြီး မင်းတို့အမျိုးတိရစ္ဆာန်မလေးတွေနဲ့ပေးလျော်.. အေးတကယ်လို့ ဘဘကြီးရှုံးရင် မင်းကိုဝက်သားတုတ်ထိုးတရုတ်တန်းမှာလိုက်ဝယ်ကျွေးမယ်.. ကောင်းမှကောင်း... ဘယ်လိုလဲ
မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ မူဆလင်တွေ ... မရှိတဲ့ သမိုင်းကို အရှိလုပ်ယူပြီး .. မူဆလင်လူမျိုးကို ရခိုင်ဖြစ်ချင်လို့ ရမလား ။ မူဆလင်၇ိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ .. ရခိုင်လူမျိုး မဟုတ်ဘူး ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး ။ ရာဇ၀င်မ၇ှိဘူး ။ ခေတ်သစ်မှာလည်း လာအော်နေလို့မရဘူး ။ ကိုယ့်ပြည်ကို ကိုယ်ပြန်ကြပါ။ မပြန်နိုင်ရင်လည်း .. ခိုလှုံရာ တိုင်းပြည်မှာ နေ၇ာလုဖို့ .. ပုံမှားရိုက်ပြီး အခွင့်အေ၇းတွေ တောင်းဆိုဖို့မလုပ်ပါနဲ့ ။ အစွန်းေ၇ာက် မူဆလင်တွေကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ပြသနာမျိုးစုံ ရင်ဆိုင်ကြုံနေရပြီ။ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ၊ လူမျိုး ကို မစွန့်နိုင်ရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာပဲ လူလုပ်ပါ။ တစ်ခြားလူမျိုး တိုင်း၇င်းသားကို မစော်ကားပါနဲ့။ ဘုရားရှင်ကို မစော်ကားပါနဲ့ ။ အရှင်လတ်လတ် လည်မျိုလှီးဖြတ်တဲ့ ၇က်စက်မှုမျိုးကို အစွန်းေ၇ာက်မူဆလင်တွေကပဲ ပွဲတော်တစ်ခုအနေနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီးကျင်းပကြတာပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဒဘာသာတွေက အဲဒီအယူဝါဒကို ကြောက်လွန်းလို့ ပါ။ ရိုဟင်ဂျာတွေက အာရပ်ကနေလာကြတယ်လို့ အော်နေကြတယ်။ ဒါဆိုလည်း အာရပ်ကိုပဲ ပြန်ပါတော့လား။ ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်သားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ။ မပြန်နိုင်ရင် အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်အောင် နေကြပါ။
မြန်မာတိုင်းရင်းသား အပေါင်းနဲ့ ဘင်ဂါလီ လီးကုလားအပေါင်းတို့ မွတ်ဆလင် ဘာသာအကြောင်းကို ယခုထက်ပိုသိချင်ရင် အထက်ပါ ၀ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်ကြကုန်လော့
မွတ်ဆလင်၏ အကြောင်းကို လီးကုလားများ
thihatunzaw is right....im also toungoke.....kala rohinga ...i neverhavebeen here this name before.they all r lie.we need to kill allkala .......with pork poison.
တာသိရင် ကောင်းကောင်းနေ သမိုင်းကိုမလိမ်
တောင် ၁၀တန်းအောင်မယ့်ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး ငါ့အ
သက် ၂၅ မကျော်ရင် ကုလားဖင်ချလို့မရဘူးလား ဒါဆိုကုလားမဖင်ချ
မယ်ကွာ ၂၅ကျော်တဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့ဖင်ချ
လိမ့်မယ် မင်းတို့ဖင် ၀က်ဆီသုတ်ထား ဟုတ်ပြီလား။စောက်ကုလားက ကျားလုပ်ချင်သေးတယ် ရခိုင်ဆိုတာ ကုလား
ကိုနိုင်လို့ ရခိုင်လို့ခေါ်တာကွ လီးကုလားရဲ့
သတ္တိရှိရင် ငါ့လိုနာမည်မှန်နဲ့ရေး Anonymous မလုပ်နဲ့
hey all motherfucker muslim allah fucker.........dont you all talk so much.ur all muslim will die.i already inventedamedicine name is[elite poison killer for muslim]making by poip shit.this poison will be kill all muslim....who is the name is MYOSOUNKname is just like legent.but talk like bitch..like dog.ok whatever you all muslim will going to die by my poison.ခွေးမသား ကုလားမျိုးတွေ။။။။။။။။။အားလုံးကို
ခွေးချီးပေး စား လိုက်
zawnyi nyithein said...